Korea: Ny taombaovao an-aterineto sy avy amin’ny onjam-peom-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Korea: Ny taombaovao an-aterineto sy avy amin'ny onjam-peom-pirenena
Voadika ny 11 Febroary 2009 18:38 GMT
Mampientanentana ny olona na aiza na aiza ny fiandrasana ny taona vaovao. Miara-mivory amin'ny toerana iray ny olona mandray ny taona vaovao. Eto Korea dia eny amin'ny tilikambom-pamataranandron'i Bosingak ny olona no mifamotoana.
Kanefa toa niainga tamin'ny korontana ity taona ity.
Tsy maintsy nametraka ny onjam-peom-bahoaka KBS eo amin'ny toeran'ny voampanga ny olom-pirenena. Voapanga ho namorona mivantana an-tsary sy am-peo ho amin'ny alin'ny faran'ny taona i KBS. Hosoka ny horonantsary midify tsy maka sary ireo mandray anjara maro ary namboamboarina ny sary. Nijoro (amin'ny maha-izy azy) kosa ny televiziona an-tserasera sy ny lahatsarin'olom-pirenena fa tsy tahaka ny an'ny (fanjakana).
Manakiana an’I KBS ny orinasan-tserasera hafa ary manontany ny dikan’ny atao hoe onjam-peom-pirenena.[EN]
Betsaka koa ny olona sosotra amin’ity toe-javatra ity.
Tany Bosingak aho tamin’ny taombaovao 2009. Nitondra labozia tokoa aho. Maro ny olona no nitondra labozia sy sora-baventy milaza hoe: “Miala i Lee Myung Bak”. Nihokakoraka tamin’ny feo mafy ry zareo hoe:”Toherinay ny faneriterena ny fampahalalam-baovao”. Kanefa, rehefa nahita ny KBS TV taty aoriana dia hitako fa namoroporona ry zareo izay tena mifanalavitra amin'ny marina.
Mandinika kokoa ity toe-draharaha ity ny olona rehefa nambara ny fitsipika vaovao mifehy ny fampahalalam-baovao.
Tokony hijoro indray isika ry vahoaka. Tokony tohanantsika foana ny fihetsiketsehan’I MBC mba ho tombotsoantsika……… tokony sakanantsika ny lalanan’ny fampahalalam-baovao isisihan'ny fitondram-panjakana. Mandroso mihemotra ny tantara. Mikoro tsikelikely ny demokrasia izay azontsika tamin’ny fanoherana ny jadona tamin’ny taona 1970-80. Raha naheno ny feo (fahamaroam-pitenenana) izay nofoanana tamin'ny 1 janoary, dia nieritreritra aho fa… fahamarinana diso izany. Any amin'ny sarimihetsika sasantsasany ny vondrona mpanao jadona dia mifehy fampahalalam-baovao aloha voalohany indrindra dia mampiely vaovao diso amin'izay. efa nahita ny sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe V midika Valifaty aho. Toa izany no zavamisy atrehintsika amin'izao fotoana izao. Raha manaiky resy isika dia ho loza kokoa noho ny ao amin'ny sarimihetsika no hiainantsika. Iangaviana mba andrehitra ny labozianareo ianareo. Aleo ankalazaina ny fahafahana, ny demokrasia ary ny fahamarinana. Tokony hivoaka miaraka amin’ny laboziantsika isika. Governemanta tsy misy vahoaka………Governemanta izay manambany ny olona. Tokony asehontsika hoe iza no tompon’ity firenena ity.
Maro ny olona mitady ilay fantsom-baovao an-aterineto.
Mihevitra aho fa nahita ny nasehon'ny KBS ianao omaly. Tsy nisy feon’ny olompirenena tao. Nisy sehon-javatra izay nanampina ny maso sy ny sofintsika tao. Raha lany io lalànan'ny fampahalalam-baovao io, dia hisy ihany ny fihatsaram-belatsihy (na fanalan'andro = comédie) tahaka izao. Tena mampidi-doza ity fa tsy hoe zava-mahatsikaiky (comédie) fotsiny. Tokotokony ho ny 90 isan-jaton’ny olom-pirenena tany Bosingak no manohitra an'i Lee Myung Bak. Kanefa tokony ho hitanareo hoe inona no nasehon’I KBS omaly. Hita fa nisy fivoarana ny fahaizam-pampitam-baovao. Raha mijery ny Sajahoo TV ianareo dia ao ny vaovao tena nisy.
Blaogy maro no mampitaha ny horonatsary anankiroa.
Tsy nanam-bintana nahita an-tsary ny fandraisana ny taona vaovao 2008 aho. Niara-nojereko nandritra ny fotoana iray ny fahitalavi-pirenena, ny KBS, ny Sajahoo TV ary ny fatsom-baovao amin'ny aterineto aho. Na dia toerana iray aza no naseho dia tsy nisy nitovizana ny horonantsary nipoitra. Rehefa nijery tao avy tamin'ny alalan'ny zoro iray lehibe aho dia nahita olona betsaka nitondra labozia sy mitondra saina eny an-tanany ary miantsoantso teny tigetra. Teny amin'ny manodidina an’i Bosingak, dia maro noho ny isan’ireo olom-pirenena ireo polisy nanodidina azy ireo mba hiarovana sy hijerena ny fihetsiky ny olom-pirenena. Na izany aza, tsy hita tao amin’ny KBS io fitrangan-javatra io. Nisy fahatapatapahana foana isaky ny roa segondra (latsaky ny im-polo miantoana) ary ny zoro lehibeny dia manalavitra kokoa any amin'ny 100 metatra any ho any. ny ambin'ny horonantsary moa dia feno mpihira sy toby Televiziona.
Na izany aza, ny tena nanohina ahy dia ny feo avy amin’ny Televiziona roa tsy misy itovizana velively. Latsaky ny 10 degre ny hatsiaka (ny mari-pana). Noho izany, betsaka ireo olona miakanjo fonon-tanana na manitrika ny tanan’izy ireo anaty paosy. Mirohondrohana tokoa ny horakoraky ny olona ka na ianao mpitazana aza afaka maheno izany. Fa ny tehaka izay henontsika dia toy ny feon-tehaka avy any amin'ny tranompokonolona.